မျက်စိကောင်း၊ မကောင်း သိချင်ရင် ဒီပုံထဲက B ကို ၁ဝစက္ကန့်အတွင်းရှာကြည့်လိုက်ပါ – Trend.com.mm
Posted on September 12, 2018 by Wint
သင့်မျက်လုံးကို ဘယ်နကြိမ်လောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖူးလဲ? မလုပ်တာ ကြာပြီဆိုိရင် အခုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
နံပါတ် 8 တွေကြားမှာ B အက္ခရာကို ထည့်ထားပါတယ်။ B အက္ခရာကို နှစ်ခုထက်မနည်းထည့်ထားပါတယ်။ အထဲမှာပါတဲ့ B တွေကို ၁ဝစက္ကန့်အတွင်း ရှာနိုင်ပါသလား ။
ကဲ … ရှာပြီးပြီဆိုရင် B ဘယ်နခုလောက်ကို ရှာတွေ့ထားလဲ? ဒီ testက အပျော်သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မျက်လုံးရဲ့အမြင်အာရုံအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ test လေးတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလို မျက်လုံးကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရင် အမြင်အာရုံမှုန်ဝါးတာနဲ့ မျက်လုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမဆို လှုပ်ရှားမှုရှိနေမှ လန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာပါ။
အခုခေတ်မှာ ဖုန်းတွေ ၊ ကွန်ပျုတာတွေ အရမ်းအကြည့်များလာကြတော့ ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကို ဂရုစိုက်ဖို့မေ့လျော့လာကြပါတယ်။ မျက်လုံး ယာယံ၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊ အမြင်မှုန်ဝါးခြင်းနဲ့ ခေါင်းကိုက်တာတို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် မင်းရဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုနေပါပြီ။
ကိုယ်စိုက်ကြည့်နေရတဲ့ ကွန်ပျုတာဆီကနေ အကြည့်လွှဲလိုက်ပါ။ စက္ကန့် ၃၀လောက် မျက်လုံးမှိတ်ထားပြီး လက်လေးနဲ့ အသာယာနှိပ်ပေးပါ။ မျက်စင်းခတ်ဆေး ပုံမှန်သုံးပါ။ ဖုန်းအသုံးများရင် လျော့ချနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ခုနက ပုံထဲမှာ B ဘယ်နခုလောက်ရှာတွေ့လဲ ? ဒါဟာ သင့်မျက်လုံးအတွက် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းပါ။ B တွေအကုန်ရှာတွေ့တယ်ဆိုရင် မင်းမျက်လုံးမခြေအနေ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ မင်းမျက်လုံးကို သေချာဂရုစိုက်ဖို့ လိုနေပါပြီ။